Ijaan Hojjettuun Oduu Hin Hifattu! -
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 30, 2017
Kan arge osoo jiru, kan dhagahe himu malee jedhee bookkisuun waanuma jiru. Haasawaan bakki hin dhaqabamne hin jiru. Waan haasawan hojitti hiikuun garuu hin salphatu. Yeroo ammaa dhimmi FXG Qerroon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiru irratti yaadota gara garaa heddutu namoota gara garaan odeeffamaa jira. Abbichi many’aa osoo jiru qasansiron woyuu keessa hin jirre hiikkaa gara garaa itti kennuu hin dandeettu.
Akkana ykn akkas gochuu qaban yaada jedhu keessummeessuu bira dabranii akkana gochaa jirra jechuu irra yeroo Qeerroon geettee jirtutti kun ta’u balaa qaba, kun ta’uu baatu balaa hin qabu yaada jedhuun akkuma baratame qabsoo sakaaluuf tattaaffiin godhamaa jiru salphaa miti. Qeerroo Bilisummaa Oromoo addaan diiguudhaaf Qeerroo Oromiyaa jedhu yeroo kanatti gadi baasuun diinummaa raawwachuu irraa wanti adda godhu tokkolee hin jiru. Jecha Adda jedhu jecha Kallacha jedhutti jijjiiruun afanfaajahiinsa uumuuf yoo ta’e malee bu’aan addaa inni fidu tokkolleen hin jiru.
Dhimma FXG Qerroon geggeeffama jiramu irratti waa jechuu fi dhiisus kan danda’u Qeerroo fi ABO qofa. waan ofii hojjataa fi hojjachiisaa hin jire irratti qajeelcha kennuuf taftaf jechuun qabsicha dhiibbatee sadarkaa murteessaa irra gahe kana gufachiisuuf yoo ta’e malee hiikkaa biraa hin qabu. Qeerroon qaama of danda’e akka ta’e hojiidhaan lafa irratti of agarsiisaa jira. Deeggarsi inni dhala Oromoo cufa irraa barbaadu guddaan dura dhaabbachuu dhabuudha. Sab-himaalee fi abbootiin sab-himaalee maqaa Oromootiin daldala siyaasaa geggeessaa jiran Oromoo fi Oromiyaa irratti of aangessuu yoo barbaadan hooggana dhaaba siyaasaa ta’anii gadi ba’uu qabu. Oromoo walii gala aangessuuf kan carraaqan yoo ta’an ammoo sochii kana sakaaluuf xuriin qaqqabachuu irraa of qabuu qabu.
Diinni alaabaa diina isaa qabsiisee ummata isa jibbu hiriira mormii of irratti baasu seenaa mootummoota addunyaa irratti argamee ykn dhagahamee hin beeku. ABO diinatu himatatti beekna malee firatu himatatti hin beekne. Hiriirri ta’e ummata Oromoof bu’aa buuse malee diinaaf bu’aan buuse hin jiru. Karaa keenya malee karaan nama baasu hin jiru jechuu yoo taate namuu karaa irra deemu ni qaba waan ta’eef hamma karaan naannessee walitti nama fiduu qabsoo wal harkatti qabuu dhiisanii karaa namatti fakkaate deemuu namni nama dhoorgu hin jiru.
Dubbiin nama tuttuqanii maaliif nu tuqan jechuun ammoo hin barbaachisu. Kan balleesse faana waa balleessuu hin barbaachisu jechuudhaan ABO osoo beeku afaan isaa qabatee turuun bilchina malee wallaalummaadhaa miti. Cal’isuun sodaachuu/qaanfachuu osoo hin ta’in fageessanii waa ilaaluudha. Tokke tokkee fuula face book irratti yaatee qabsoo tana bacancarsuuf hooggana dhaabaa irratti olola ooftus deebii dhabee miti. Wallaalummaa fi farrummaan namoota machaa’an waliin gadi bu’anii haasawuun xiqqeenya guddaa akka ta’etti amanee cal’isee itti dhiise.
Ijaan hojjattuun hojii hin dadhabdu. Qabsoo lubbuu nama gaafattu afaaniin haffalleessanii odeessuun isaanuma madaalchisa malee ABO hin madaalchisu. Boqannaa sammuu of dhoorganii halkanii guyyaa samii fi dachii hunda naanna’anii galgala gamanuma deebi’uuf jiraatan waan ta’eef itti hin rakkatu. Allaattii kaati lafa, buuti lafa, duuti lafa akkuma jedhamu namootni akka dhuunfaatti hooggana dhaaba kanaa irrati daaraa haraa turan boru deebi’anii irraa araabuuf jiraatu.
Kan isa faarse faarsuu kan isa abaare/arrabse abaaruu/faarsuun hojii hooggana dhaaba kaatii miti. Waa hundaa hojitu adda baasatti amana waan ta’eef cal’isee hojii isaa qofa ooffachaa jira. QBO ABOn dhiibamtee dhuftee rarraga injifatnoo irra geette duubatti deebisuuf yaaluun hin barbaachisu. Ijaa fi gurri Qeerroo Bilisummaa Oromoo isin irratti deebi’ee jira. Warraaqsi ummata Oromoo walii galaan oowwee deemaa jiru farreen walabummaa fi bilisummaaf gufuu ta’an hundaa dhiibee ofitti makee jira. Wal hin gatnuu nu hin gatinaa dirretti bahanii dubbachaa jiru. Kun injifatnoo tokko. Lammiin Oromoo asii achi adda baha jedhanii yaaduun of gowwoomsuudha. ABOn, WBOn, Qeerroon, Oromoon tokko. Nama tokkicha qaama isaa gargar ciruuf yaaluun ajjeesuuf akka ta’e beekkamuu qaba. Kanaaf, akka nam-tokkeettis haata’uu bifuma fedheenuu dhala Oromoo ta’ee qaamni yeroo ammaa warraaqsa kana dhoksaan haa ta’uu dirree bahee dura dhaabbatu diina qabsoo kanaati.
Ijaan hojjattuun hojii hin dadhabdu waan ta’eef ijaan hojjachuu dhiisanii humnaa fi beekkomsaan hojjachuuf gadi haa bahan.